Guardiola oo ka hadlay wararka la xiriirinaya Lionel Messi inuu ku biirayo kooxda Man City – Gool FM
Guardiola oo ka hadlay wararka la xiriirinaya Lionel Messi inuu ku biirayo kooxda Man City
Dajiye November 20, 2020
(Manchester) 20 Nof 2020. Tababaraha Manchester City ee Pep Guardiola ayaa ka nixiyay taageerayaasha kooxda, kaddib markii wax laga weydiiyay mustaqbalka Lionel Messi ee Barcelona, maadaama uu qandaraaskiisa Barca dhacayo xagaaga soo socda.
Manchester City ayaa lala xiriirinayay saxiixa Lionel Messi xagaagii la soo dhaafay, warbaahinta ayaa weli xaqiijineysa suurtagalnimada uu ku imaan karo garoonka Etihad xagaaga 2021, maadaama uu xilligaas dhacayo qandaraaskiisa kooxda reer Catalonia.
Xilli ay taageerayaasha Manchester City sugayeen war ka yimaada Guardiola ee ku saabsan suurtagalnimada saxiixa Lionel Messi, ayuu tababaraha reer Spain muujiyay rabitaankiisa ah in laacibka uu sii joogo Barcelona ilaa iyo uu ka fariisanayo kubadda cagta.
Pep Guardiola ayaa shir jaraa’id uu ka soo muuqday kahor kulanka ay habeen dambe booqan doonaan Tottenham Hotspur, wuxuu ku sheegay:
“Mustaqbalka Messi? waa ciyaaryahan ka tirsan Barcelona, ​​haddii aad fikirkayga weydiisatana, aad ayaan ugu mahadcelinayaa Barcelona wax kasta oo ay ii sameeyeen, waana taas sababta aan u doonayo inuu mustaqbalkiisa ciyaareed ku soo gabagabeeyo Barca.”
“Tani waa sida aan rabo, laakiin ma garan karo waxa ka dhex guuxaya maskaxdiisa marka qandaraaskiisa uu dhamaado.”
Waxaa xusid mudan in Guardiola uu tababare ugu noqday Lionel Messi kooxda Barcelona mudo 4 sano ah, ​​isla markaana ay si wada jir ah u gaareen guulo badan oo taariikhi ah.
Frank Lampard oo si weyn u difaacay mid ka mid ah xiddigahiisa kooxda Chelsea
Ronald Koeman oo si RASMI ah u shaaciyey liiska xiddigaha Kooxdiisa Barcelona uga qeyb galaya kulanka adan ee Atletico Madrid